आईफोन ले आईफोन sales बिक्री रेकर्डलाई हराउनेछ आईफोन समाचार
आईफोन ले आईफोन of को बिक्री रेकर्ड तोड्नेछ
आईफोन for का लागि अपेक्षाहरू धेरै उच्च छन्। दशौं वार्षिकोत्सव आईफोन (अर्को वर्ष पहिलो आईफोनको प्रक्षेपण पछि १० बर्ष हुनेछ) यसका बारे भनिने सबै कुराबाट निराश नहुनु एकदम गाह्रो समय हुनेछ। र हामीले २०१ 8 सम्म सुरू पनि गरेका छैनौं। यदि यो पर्याप्त थिएन भने, अब जानकारीले आश्वासन दिन्छ कि आईफोन ले आईफोन the को हातमा रहेको बिक्री रेकर्डलाई हराउछ, अर्को वर्ष लगभग १ 8० मिलियन इकाइहरू बेच्नेछ।, जुन यो सेप्टेम्बरमा बिक्रीमा लाग्ने अपेक्षा गरी खराब होईन। केहि सुविधाहरू जस्तै ताररहित चार्जि the ताराहरू हुनेछन्, र शुरूमा भनेको कुराको विपरीत, यस्तो देखिन्छ कि यो दायराको शीर्षमा मात्र नभई सबै मोडेलहरूमा देखा पर्नेछ।
भनिन्छ कि २०१ 2017 को लागि तीन मोडेलहरू हुनेछन्, जसमध्ये दुई वर्तमान आईफोन and र Plus प्लसको बराबर हुनेछ, समान स्क्रिन आकार र समान आयामहरूसहित तर नयाँ सामग्रीहरू जस्तै काँचको पछाडि र धातुको साथ। चेसिस। अन्य मोडेल पूर्ण रूपमा नयाँ हुनेछ, एक AMOLED स्क्रीन र घुमावदार संग, र अफवाहहरु अनुसार यो फ्रेम को अभाव हुन सक्छ, जस्तो देखिन्छ कि फेसनले अब थोपेको छ। यो आईफोन AM एमोलेड सब भन्दा महँगो मोडेल हुनेछ, र यसले केही विशेष प्रकार्यहरू गर्दछ, तर वायरलेस चार्जिंग ती मध्ये एक होइन, किनभने सबै तीन मोडेलहरू हुनेछन्। हामीलाई के थाहा छैन यदि वायरलेस चार्जर बक्समा समावेश हुन्छ वा हुँदैन, वा यो सबै मोडेलहरूमा समावेश हुन्छ भने। एप्पल "सस्तो" उपकरणहरूको लागि परम्परागत चार्जिंग केबलको लागि जान सक्दछ र "शीर्ष" आईफोनको लागि चार्जर आरक्षित गर्न सक्दछ।
धेरै आईफोन AM एमोलेड को स्क्रीन आकार को बारे मा पनि भनिएको छ। फ्रेमका साथ वितरणले तपाईंलाई स्क्रीनको आकार 5,8..5,2 इन्चसम्म बढाउन अनुमति दिनेछ, तर यस्तो पनि हुन सक्छ कि घुमेको किनारहरूमा टच सतह सानो छ, .XNUMX.२ इन्च भन्दा बढि हो।। हुनसक्छ, यो १ 150० मिलियन युनिटसम्म पुग्न धेरै गाह्रो हुनेछ, आईफोन ले त्यस अवधिमा १२० मिलियन बेचेर ध्यानमा राख्दै त्यहाँ विस्तार गर्न अझ धेरै नयाँ बजार छैन भनेर विचार गर्दै।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » आईफोन ले आईफोन of को बिक्री रेकर्ड तोड्नेछ
यो समाचार आफैंमा अचम्मको छ, मानिसहरूले आईफोन buy किन्न बचत गरिरहेका छन् र भविष्यशास्त्रीहरू आईफोन7ले than भन्दा बढी बेच्ने कुरा बताउँदैछन्, म भ्रममा छु। १ बर्ष अघि मैले 8 ०० युरोको लागि आईफोन s एस खरीद गरें g bought जीबी र मैले मोबाइलले प्रस्ताव गर्न सक्ने २०% पनि प्राप्त गरिन। म यसलाई विश्वास गर्दिन। धेरै उपभोक्तावाद, १ बर्ष पहिले म उठें। तिनीहरू पहिले नै6प्राप्त गर्न सक्छन् s मा on मा s मा cares जुन मलाई मतलब छैन। यी एप्पल प्रत्येक वर्ष हामी एक मोबाइल मा 1 यूरो खर्च गर्न चाहन्छ। तिनीहरूले मलाई पक्रन सक्दैनन्, र कि मसँग s थ्री gs मा on मा 900 मा s को the र taking खाताहरू लिएर, मैले सप्पल कफर्सका लागि करीव 6००० यूरो खर्च गरेको हुनेछ। हामी पागल हो कि के?
बर्षेको shit ... यदि तिनीहरूले out मोडलहरू लिन्छन् र ती मध्ये एक amoled र घुमाइएको संग, अरूले आलुका साथ खान जाँदैछन्, अर्को बाहेक उनीहरूसँग अर्को months महिना सम्म स्टक हुनेछैन जुन भइरहेको छ जेटब्लक मोडल र त्यो रंग हो ... छोटकरीमा म आशा गर्दछु र आशा गर्दछु कि उनीहरूले त्यो असामान्यता नबनाउन्
मार्कोस कुएस्टा, तपाईं उपभोक्तावादका पाठहरूका लागि बिल्कुल उत्तम उपयुक्त हुनुहुन्न र भन्दै हुनुहुन्छ कि उनीहरूले दिमागमा राखेको कुरा बेच्दैनन। मेरो विचारमा त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छैनन् जुन "तपाईंको गति" मा सेल फोनहरू खरीद गर्छन्, यद्यपि त्यहाँ धेरै अन्य व्यक्तिहरू छन् जुनसँग भर्खरको एप्पल मोडेल छैन र हामी buy खरीद गर्न पर्खिरहेका छौं।
मेरो मामलामा म स्पष्ट छु कि म आईफोन 8. को मालिक बन्न सक्दछु। अहिले सम्म मसँग 3G जी रहेको छ र वर्तमानमा s एस छ… .. लामो समयका लागि iting को लागि प्रतिक्षामा !!!
म विश्वास गर्दछु कि सबैले थाहा पाउनेछन् कि कसरी उनीहरू आफ्नो पैसा खर्च गर्छन्। तर सत्य यो हो कि म उनीहरूको खोरमा मेरो हात राखेर बिरामी छु। मैले २० बर्ष भन्दा बढि उपकरणहरुमा प्रयोग गरेको छु, तर जब तपाईले उपकरणको लागि यति धेरै पैसा तिर्नुहुन्छ (म क्यानाडामा बस्छु र यहाँ तपाईले पहिले नै उच्च मुल्यमा कडा करहरू थप्नु पर्छ), कम्तिमा म चाहान्छु कि एप्पलले हाम्रो सम्मान गरोस्। लगानी गर्नुहोस् र टोलीको म्याद नलाग्नुहोस् जुन मानिसहरूले धेरै पैसा राख्छन्।
उदाहरणको लागि, उनीहरूले भर्खर २०११ बाट म्याकबुकहरूको म्याद समाप्त गर्ने घोषणा गरे। किन? र ती व्यक्तिहरूले ती मध्ये एक मध्ये एकको लागि २००० डलर भुक्तान गरे र अझै यसलाई प्रयोग गर्दछ किनकि यसले राम्रो काम गर्दछ, के उनीहरू नयाँ खरीद गर्न जान्छन्?
तपाईंसँग म्याकको प्रशंसक बन्ने अधिकार छ वा जे तपाईं चाहनुहुन्छ। म थिएँ, तर म यो ब्रान्डको दुरुपयोगबाट थकित हुन थाल्छु।
लुइसलालाई जवाफ दिनुहोस्
मैले अक्टोबर २०० October मा पहिलो आईफोन खरीद गरें र निश्चित छ कि म २०१ 2007 को आईफोन खरीद गर्ने योजना गर्दैछु।
मोनिटुरलाई जवाफ दिनुहोस्
IOS को लागि YouTube अपडेट गरिएको छ जुन हामीले हेरेका भिडियोहरू सम्झाउँदै
गुगल म्याकको लागि विशेष फोटो स्क्रिनसेभर रिलीज गर्दछ